Umhla My Pet » 6 Types of Men Women intooyikhangelayo
ukubuyekezwa: Sep. 19 2020 | 3 min ukufunda
Enjani amadoda kwanabafazi intooyikhangelayo? Lo umbuzo kunye neempendulo ezininzi. Ezinye guys khangela iibhombu ngesondo kunye imizimba egqibeleleyo kunye nesimo diva, lo gama abanye umfazi playful linomtsalane kakhulu. Ezinye guys kufuneka umfazi lowo uya banyamekela, kanye nje oomama babo kusetyenziswa. Kukwakho abo apho isuntswana imfihlelo okanye ingqiqo ephakathi geqe umdla kakhulu. Ngaphandle ngathi ukuba singayithenganga, apha ezintandathu iintlobo amadoda kwanabafazi abaninzi intooyikhangelayo:
Olu ke luhlobo lokuqala umfazi qatha engqondweni nabani xa uzama uku bana phandle zeziphi iintlobo nabafazi badla ukutsala abantu kule mihla. Yinyani: ukuqhushumba sex iza kwenza 99% amadoda babuye intloko yabo xa ehamba phantsi esitalatweni. Yinto kanye umthetho yayiyindawo! nokuba, ukuba sinokuqiniseka: ezi kuphela abafazi namadoda nimfunayo! enyanisweni, xa kukhangelwa ubudlelwane bexesha elide, abanye abafana baya baphephe iibhombu ngesondo.
Nivile ukuba amaxesha amaninzi kangaka: madoda engazange akhule ngokupheleleyo. Badlala kunye zokudlala zabo ivideo imidlalo yokuzonwabisa bonke ubomi babo. Nangona oku kuyinyaniso ngomntu yonke enye udibana, kufuneka uyazi kukho abo abanomtsalane kwabasetyhini ungumntwana, ukuba isimo sabo okuhle ebomini, uncumo lwabo edlalwayo ukuba olukhanyisela igumbi. Ngaba wakha wazibuza ukuba kutheni guys abadala basoloko ezitsalwa ngabafazi kakhulu omncinane? Oku kunokuba isizathu!
Kuthiwa ukuba abafazi ukhangela ngutata wabo, namadoda ngenxa ikopi umama wabo. Ngoba? Gqirha liya ukucacisa nonke malunga isiduna / zokulima esobukhomokazi sonke ukuphuhlisa ngexesha esakhula. ngaphandle kweli, kukho amadoda apho, ngaphandle misogynists ukuba, ezifana ukwabelana ubomi babo umfazi onyamekela iimfuno zabo ezisisiseko, ukupheka nokucoca. Eyaziwa ngokuba yi "engaphangeliyo", uhlobo unina-ngathi ngumfazi kumbono abantu abaninzi.
Lumka: amadoda azisoloko emva kwakho eyona yeyentombazana aze icala sexiest! Kukho abo siyalixabisa pal olungileyo uyaziqonda iziqhulo zabo, oneenkolelo abalukhethayo yabo nabalandeli bemidlalo, kwaye uyazi ukuba zokusingatha udlala console. Indawo yomfazi ekhitshini? akukho mfuneko! Kuba aba bafana, umfazi efanelekileyo exhasa iqela lebhola efanayo, yaye lutshaba elungileyo owuthandayo moto racing umdlalo wabo yokuzonwabisa. nokuba, zinto ukuze ukutshintsha kwigumbi lokulala, apho kusenokufuneka ukuba ehlise isenzo upholile kwaye uthathe phandle amaqhinga zakho esobukhomokazi.
Abafazi ungathanda singqongwe ngokwabo nge aura imfihlelo, ubuncinane kanye ekuqaleni. amadoda amaninzi kuwa kuba, kodwa xa imfihlelo aphumileyo, zinto ukuze nibe uyadika. Ngoko ke, lumnka! Ukuba mfo yakho Ndatsalwa ngecala lakho engummangaliso kwindawo yokuqala, ungafuna ukugcina ezinye konke oku. Basebenzise ilungelo lakho lokuba umfazi, kwaye uzame ukuba akungebikho, kodwa ngokuhamba kwexesha. A imfihlelo elide iyonke zinokwenza umntu acinge ukuba into abafihlela yona kuye, kwaye akukho mntu uthanda ukuba.
Abantu abadli njengabafazi ingunonca uthembeke abangakwaziyo ukwenza intshukumo enye bebodwa. guys Abaninzi baya otsaleleke ngakumbi ibe nomfazi akangaphandle ngubani ukutshintsha iglowubhu ngokwalo xa kuyimfuneko. nokuba, silumke ungayibaxi isenzo sakho ukuzimela, njengoko iqabane lakho ukuze bazive awufuni dingi kuye ebomini bakho. Nokuba uyakwazi ukulawula ukwenza ingxowa ukuba enzima ngokwakho, usenokucinga ucela uncedo kwakhe amaxesha ngamaxesha.